Hotel Magnate: gadzirisa hotera yako neiyi simulator | Linux Vakapindwa muropa
Nyika yekutamba inoenderera ichinamira paLinux. Ino nguva tinokuunzira nhau nezve a vhidhiyo mutambo unonzi Hotel Magnate. Mushure mekubudirira kwekutsvagisa vanhu mari kwatanga papuratifomu yeKickstarter uye nepundutso ingangoita 70K madhora eAustralia, zvinoita sekunge ichazosvika kuGNU / Linux futi. Kunyangwe izvi zvauya nekushamisika zvachose, sevaya venyu vakatevera zita iri vachaziva.
Kune avo vasingazive, mumushandirapamwe wemari pakange pasina ongororo ichizivisa kuti kwaizove nechiteshi cheLinux. Kune rimwe divi, payakaonekwa muValve's online vhidhiyo yemitambo chitoro, Steam, chikamu chakazara che izvo zvinodikanwa zvinodikanwa zveHotel Magnate pamakomputa ane kugoverwa kweLinux. Zvakare, zvinoita sekunge mushambadzi Bastion Inopindirana yakaenderana kune mamwe midhiya kuti pachave neLinux vhezheni, asi kuti haizove inowanikwa kwekutanga kuwana. Tichafanirwa kumirira zvishoma ...
Bastion Inopindirana yakabatana neCrytivo kune rumwe rubatsiro, mumwe mugadziri uye muparidzi anozivikanwa nemamwe mazita anoshanda zvikuru paLinux, senge Iyo Universim. Tichifunga izvi uye kubudirira kwemushandirapamwe wekutsvagisa vanhu, zvinoita sekunge inogona kunge iri zita rakanaka kune vese vanofarira rudzi urwu rwekufananidza uye manejimendi mitambo.
Kana iwe uchida kuziva zvimwe zvakawanda zveHotel Magnate, heano mamwe akakosha mapoinzi:
Iwe unogona kuvaka, kupa uye kutarisira hotera yako wega nematanho akati wandei.
Iwe uchaita zvinodiwa uye zvinodiwa nevaenzi vako Uye, kana ukazviita nemazvo, unokwezva vatengi vakawanda kuti varambe vachivandudza zvivakwa zvako.
Hira vashandi kuchenesa, kutarisira, kutarisira uye kuchengetedza hotera.
Manage prices yemakamuri, mihoro, maresitorendi, nezvimwe.
Iva nyanzvi mu Marketing kuti vamwe vashanyi vauye.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Hotel Magnate: gadzirisa hotera yako neiyi simulator
Gnome 3.36 iri kuuya Kurume 11, 2020